बिपीको चेतना एउटा युगको चेतना हो– डा. भट्टराई - Everest Dainik - News from Nepal
बिपीको चेतना एउटा युगको चेतना हो– डा. भट्टराई
काठमाडौं, मंसिर ७ । नयाँशक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बिपीको प्रेरणा जोडिएको बताएका छन् । पत्रकार जगत नेपालद्वारा लिखित बाह्रखरी बुक्सको पहिलो पुस्तक ‘बिपीको विद्रोह’ को शुक्रबार लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
“बिपीलाई सानो घेरामा राख्नु हुँदैन, डा. भट्राइले भने, “बिपीको चेतना एउटा युगको चेतना हो, नेपाली समाजलाई आधुनिक युगमा प्रवेश गराउने तथा समाज र परिस्थिति हेरेर नीति लिनसक्ने व्यक्ति बिपी हुनुहुन्थ्यो ।”
याे पनि पढ्नुस निर्मलाका बुबा भेट्न डा. भट्टराई शिक्षण अस्पतालमा
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका संयोजक डा. भट्टराईले बिपीले अधुरो छाडेको काम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पूरा गरेको बताए ।
पुस्तकबारे टिप्पणी गर्दै त्रिभुवन विश्व विद्यालयका पूर्व उपकूलपति केदारभक्त माथेमाले बिपी सामाजिक, राजनीतिक दर्शक, साहित्य, कला, शिक्षा क्षेत्रका बहुआयामिक व्यक्तित्व रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
याे पनि पढ्नुस बीपी कोइरालालाई नेपाल रत्न
पुस्तकका लेखक जगत् नेपालले विभिन्न व्यक्तिले दिएको महत्वपूर्ण सूचनालाई समेत पुस्तकमा समावेश गरेको बताउँदै बिपीको विद्रोही भागमा पुस्तक केन्द्रित भएको धारणा व्यक्त गरे ।
याे पनि पढ्नुस बाबुराम भट्टराईले यसरी मनाए धान दिवस
ट्याग्स: BP koirala, Dr. Baburam Bhattari, Jagat Nepal